Ufuna imali yakhe obondliswa 'ibhantshi' - Ilanga News
Home Izindaba Ufuna imali yakhe obondliswa ‘ibhantshi’
Ufuna imali yakhe obondliswa ‘ibhantshi’
Uthi abasekhweni bamkhokhisa nenhlawulo ka-R14 000
UMNU Simphiwe Mazibuko waseMofolo, eSoweto, othi uyifuna iphelele imali yakhe abondla ngayo ingane abecabanga ukuthi ngeyakhe kanti “ugqokiswe
ibhantshi” ngowesifazane abethandana naye.
UFUNA ukubuyiselwa imali yenhlawulo “neyesondlo” owesilisa waseMofolo, eSoweto, okhala ngokondliswa ingane agcine ethole kamuva ukuthi kakuyona eyakhe. UMnu Simphiwe Mazibuko uthi uyifuna yonke imali abondla ngayo le ngane, njengoba unina azivumela ukuthi kakuyona eyakhe, emuva kokuba kwenziwe ulibofuzo eminyakeni emibili edlule. Uthi sesiside isikhathi elinde inkokhelo yakhe kuNkz Duduzile Mkhwanazi Sibiya, athi umondlise ingane angayizali. Udaba lwalaba bobabili luke lwaya ngisho enkantolo emuva kokuba uMnu Mazibuko ecele ukuba kwenziwe ulibofuzo. Elandisa leli phephandaba ngokwenzeka, uthi ubesehlale isikhathi eside nowakwakhe bengabatholi abantwana emshadweni, okuyinto emenze waphumela ngaphandle.
Yize enayo ingane ayithola ngaphambi komshado kodwa uthi ubefuna enye. “Emuva kokungabatholi abantwana, ngibe sengihlangana nalona wesifazane (uNkz Mkhwanazi) saba nobudlelwano naye. “Kuphele cishe izinyanga ezintathu sihlangene, wangitshela ukuthi uzithwele. “Ngijabule kakhulu ngoba bengiyidinga ingane njengoba ngineyodwa nayo engayithola ngingakashadelwa. “Siqhubekile nokuba nobudlelwano, kwadlula isikhashana saba nengxabano eyagcina ingiphoqa ukuba ngibuyele emzini wami. “Kuthe ngo-2019 unyaka uqala, sazilungisa izinto nayo ingane isizelwe.
“Ngibe sengiya kubo ngiyokhipha inhlawulo, abayibiza u-R14 000, kodwa mina ngakhokha uR10 000, bengisazobuyela ngiyoqedela. “Ngenxa yenjabulo yokuthola umntwana, ingane bengiyondla ngo-R2 000 njalo ngenyanga ngoba bengisebenza, ngingenankinga. “Ebengikuqaphela wukuthi ingane ibingafani nami, ngabe sengimbuza ukuthi kwenziwa yini. “Ungitshele ukuthi ingane iyashintsha. “Kuhambe isikhathi wangitshela ukuthi kakusamele ngifike ngizobona ingane. “Lokhu kungixakile, ngabe sengisola ukuthi kukhona okushaya amanzi. “Ngibone kungcono ukuba ngiye enkantolo ngoba bese zikhona izinsolo zokuthi kungenzeka ukuthi kakuyona eyami.
“Inkantolo imenzele incwadi embizela khona (enkantolo) ukuba kuyokhulunywa lolu daba, okuyilapho engicele khona ukuba kwenziwe ulibofuzo. “Sinikezwe usuku lokuba sibuye kuzothathwa amasampula, sabe sesilinda. “Ngosuku lwemiphumela, ngabizelwa kwelinye ihhovisi enkantolo, ngatshelwa ukuthi imiphumela iveza ukuthi ingane kakuyona eyami futhi naye lona wesifazane kakuyona eyakhe. “Kuthe sekumele singene enkantolo emuva kokuba ngitshelwe imiphumela, ubengasabonwa. Nganikwa usuku okumele ngibuye ngalo.
“Sisalinde lolu suku, ngishayelwe ngusonhlakalahle ucingo, engitshela ukuthi uzofika kwami kodwa uzoqala emzini wakhe lona wesifazane.”Kudlule isikhashana waphinde washaya usonhlalakahle, wacela ukuba ngifike emzini wakhe lona wesifazane kuzoxoxwa. “Nginqabile, ngabatshela ukuthi masihlangane enkantolo ngosuku ebesinikwe lona,” esho. Uthi sebesenkantolo utshelwe ukuthi udaba luyasuswa khona ngoba sekunesivumelwano lapho lona wesifazane ezibophezela khona ukuthi uzoyikhokha imali. “Kuze kube manje kangikaze ngiyithole imali yami, sekuyophela iminyaka emibili ngilindile ngithi uzoyikhokha kodwa uzithulele nje.
“Ngithole ukuthi ingane wayitholelwa ngumngani wakhe, bekukhohliswa mina nje ngoba bekwaziwa ukuthi ngifuna ingane. “Ngigcine ngibona kungcono ukuba ngithole ummeli ukuba asebenze udaba lwami ukuze ngizothola okungokwami. “Umkami ngimazisile ngakho konke okwenzekile, wangeseka kukhona,” esho. U-Adv Mahlatsi Mathabela wePP Milazi Attorneys osebenza udaba lukaMnu Mazibuko, uluqinisekisile. Uthe bamatasa nezinhlelo zokufaka amasamanisi enkantolo. Ethintwa uNkz Mkhwanazi, uvumile ukuthi baya enkantolo noMnu Mazibuko, kodwa wathi kwasekuqaleni ingane bekuvele kungeyona eyakhe. Uthi ingane okukhulunywa ngayo ubeyigada njengoba engumuntu owenza loyo msebenzi wokuqapha izingane.
“USphiwe besithandana naye kwaba khona isikhathi lapho sixabana khona, wahamba. “Kudlule isikhathi wafica ingane encane ebengiyigada wangibuza ukuthi ngekabani. “Ngiphendule ngokudlala ngathi ngeyami wabe esebona ukuthi ngeyakhe njengoba besinobudlelwano. “Uhambile, ngabona esebuya namaphoyisa senginikwa incwadi engibizela enkantolo,” kusho uNkz Mkhwanazi. Mayelana nemali yesondlo, uthi kungamanga ukuthi ubemnika imali kodwa ayaziyo ngu-R10 000 amulobola ngawo kubo. Uthi leyo mali yakhokhwa emndenini womkhwenyana wakhe osewashona, kwazise wayeshadile. “Imali engiyaziyo ngu-R10 000. Uma eyifuna leyo mali makathumele abakhongi bakhe baye kwa Sibiya lapho engangishadele khona ngoba akanginikanga mina esandleni. “Makabhale incwadi ayilethe besengiyihambisa kubona ukuze ezothola leyo mali,” kusho yena.
Previous articleSikhulu isililo ngokuminza kwephoyisa ebeliyotakula abantu
Next articleBazobhaciswa kwezinye izikole abafundi